ကြေးဝါ Ball ကို Bibcock China Manufacturers & Suppliers & Factory
ကြေးဝါ Ball ကို Bibcock - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ကြေးဝါ Ball ကို Bibcock ထုတ်ကုန်များ)
Hose ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူကြေးဝါ Bibcock
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8103 ကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€To1âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ဆက်သွယ်မှုကိုရေပိုက်မှ 1. Bibcock ဘောလုံးအဆို့ရှင်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။...
Chrome Plated ကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8104 အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€To1âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ဆက်သွယ်မှုကိုရေပိုက်မှ 1. Bibcock ဘောလုံးအဆို့ရှင်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။ ချိတ်ဆက်ရေပိုက်များအတွက်ပျံ့နှင့်အတူ Two- အပိုင်းအစတပ်ဆင်။...
Hose ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူကြေးဝါ Bibcocks
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8105 ကြေးဝါဘောလုံး နှင့်အတူ Bibcocks ရေပိုက် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2 €€, 3/4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ၁။ Bibcock ဘောလုံးကိုအပေါက်ဖောက်ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar
ကြေးဝါ Ball ကို Bibcock ကြေးဝါ Ball ကို Bibcocks ကြေးဝါ Ball ကို Cocks Bonnet- ကြေးဝါ Ball ကို Bibcocks ကြေးဝါ Ball ကို Faucet ကြေးဝါကိုပုတ် Bibcock ကြေးဝါ Padlock Bibcock ကြေးဝါ Bibcocks